China Soft PVC Fridge oomazibuthe mveliso kunye nabenzi | SJJ
Iimagnethi zefriji ezithambileyo zePVC zingenziwa kwimilo yakho yesiqhelo kwi-2D okanye kwi-3D. Imagnethi yefriji yesiqhelo ayisiyiyo kuphela ideco yasekhaya, kodwa ikwangumbandela omkhulu wokwazisa wenkampani.
Lonke usapho lunefriji ngeli xesha langoku. Ingaphandle leFriji yindawo yokubonisa uthando lwethu kwaye yenze ubomi bakho bube nomdla ngakumbi kwaye bunemibala, kunye neemagnethi ezahlukeneyo zefriji. I-PVC ethambileyoIimagnethi zeFrijizezona zinto zifanelekileyo ukubonisa izimvo zakho ngemibala eqaqambileyo., kunye nokukhusela ifriji yakho ukuba yenzakaliswe zizinto ezilukhuni ezinjengeemagnethi zesinyithi sefriji. Uyilo lunokuba yi-2D okanye i-3D ngombala ogcwalisiweyo, iiLogo okanye ii-logo ezilahliweyo ngeendlela ezahlukeneyo. Iimagnethi zefriji zeSoftware zePVC zikwizixhobo ezigqwesileyo zokubhengeza iimveliso zakho, izimvo okanye iikhonsepthi, ngakumbi amanani eekhathuni zezona zidumileyo kwihlabathi liphela.
Unokuba nemisebenzi engaphezulu kwiimagnethi ezithambileyo ze-PVC ezinamathelisi ahlukeneyo, njengokuvula iibhotile, izibuko, izakhelo zesakhelo, amagwegwe, iincwadi zokubhala, iibhodi ezimhlophe njl njl ngokweemfuno zabathengi. Izixhobo zethu zinobuhlobo kunye nokusingqongileyo, ziyakwazi ukuhlangabezana nemigangatho yokuvavanya ehambelana ne-US okanye iYurophu.
Motifs: die Struck, 2D okanye 3D, icala elinye okanye amacala aphindwe kabini
Imibala: inokutshatisa imibala yePMS
Ukugqiba: zonke iintlobo zeemilo zamkelekile, iilogo zingaprintwa, zifakwe kwi-embossed, saser zibhalwe njalo njalo
Izongezo: iimagnethi ezinamandla, iimagnethi ezithambileyo, ukuvula iibhotile, amagwegwe, iibhodi, iipeni kunye nezinye ngokweemfuno zabathengi
Ukupakisha: 1pc / i-bubble, okanye landela imiyalelo yakho.
Egqithileyo Iilebhile zePVC ezithambileyo
Okulandelayo: Iphepha lepensile lePVC
Iimagnethi ezingama-3d zeFriji
Iimagnethi eziPholileyo zeFriji
Iimagnethi eziqhelekileyo zeFriji yesiqhelo
Iimagnethi ezintsha zeFriji
Iimagnethi zokuhlobisa ifriji
Iimagnethi zeFriji ezenzelwe wena
Imagnethi yefriji yefriji
Uthotho Magnets Fridge PVC